मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनको गाँठो नफुक्नुको रहस्य ! « Ok Janata Newsportal
मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनको गाँठो नफुक्नुको रहस्य !
काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) यतिबेला मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनको रस्साकस्सीमा अल्झिएको छ । मन्त्री छान्ने जिम्मा नेकपाका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को पोल्टामा छ ।
अहिलेको अवस्थामा पार्टीभित्र विभिन्न गतिरोध भएपनि अध्यक्षद्वयलाई नेताहरुले ठूलो विश्वासका साथ जिम्मा सुम्पिएका छन् । अध्यक्ष लेबलबाट हुने जुनसुकै निर्णयमा नेता कार्यकर्ताहरुले हालसम्म अब्जेक्सन जनाएका छैनन् ।
सात दशकपछिको विरासतलाई दीर्घकालीन रुपमा अगाडि बढाउने मनसायले नेता, कार्यकर्ताहरु केही अब्जेक्सनहरुलाई गुम्साएर भएपनि चुप बसेका छन् । अहिले मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनको जिम्मा पूरै दुई अध्यक्षलाई छ ।
करिब तीन महिनायता देखि चर्चामा रहेको मन्त्रिमण्डल हेरफेरले आजसम्म पनि पूर्णता पाउन सकेको छैन । दुई अध्यक्षको आ–आफ्नो हठ र गुट प्रवृत्तिले मन्त्री छान्न हम्मे–हम्मे परेको नेकपा स्रोत बताउँछ ।
पार्टीका क्यापेबल नेताहरुलाई पछारेर नयाँ पुस्तालाई मन्त्रीमा ल्याउन खोजेका ओली र पारिवारिक उल्झनमा परेका प्रचण्डको निर्णय तल्लो तहका नेताहरुललाई रुचेको देखिदैन । विभिन्न कालखण्डमा आफूलाई व्यक्तिगत रुपमा सहयोग गरेको भन्दै मन्त्री अफर दिने प्रणालीले सिंगो व्यवस्थालाई धरासायी बनाउँदै लगेको नेकपाका एक नेताको बुझाइ छ ।
दशैँ अगावै मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन सक्नेगरी सहमति गर्ने प्रयास भएपनि त्यो सम्भव हुन सकेको छैन ।
दुवै अध्यक्षले मन्त्री बन्न तातेको माहोललाई केही सोलाउन दिएर पुनर्गठनको प्रक्रियामा लैजाने तयारी गरेका छन् ।